Mbupu - Gemic
Erughị 1 ct
1 ka 2.99 ct
3 ka 4.99 ct
5 ka 6.99 ct
7 ka 9.99 ct
10 ka 14.99 ct
15 ka 19.99 ct
20 ka 49.99 ct
Ihe karịrị 50 ct
Nkume omumu nke Eprel
Nkume omumu August
Nkume omumu September
Nkume omumu nke October
Nkume omumu December
Nkọwa nke gemstones
AKW GKWỌ GEMOLOGY
Biko hụ n'okpuru maka anyị Mbupu Nhọrọ:
Mbupu mbu - 35 dollar
Shipgbọ njem ebugharị na-ewe ụbọchị 3-4 maka nnyefe ma enwere ike nyochaa ya na ntanetị ọ bụla. A na-ejikwa ngwugwu zuru ezu. A mbinye aka a chọrọ n'elu nnyefe. Anaputara ya bụ Monday rue Fraịde maka ọtụtụ mba. Enweghị igbe PO (ma e wezụga UAE, Saudi Arabia na Kuwait), adreesị APO ma ọ bụ FPO nwere ike iji. Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere 'mbinye aka na faịlụ', biko kpọọ EMS iji kagbuo ikike a. Nchịkọta ndị enyerefe na-enweghị mbinye aka, n'ihi 'mbinye aka na faịlụ' enweghị ike ikpuchi onye ọrụ mkpuchi anyị.
Ọkọlọtọ edebanyere aha - USD 7
Anyị na-enye ozi ikuku edebanyere aha na mba 120. Enyere mkpuchi maka ozi ruru USD 200. Mbupu na-ewe ihe dịka ụbọchị 10-21 na-arụ ọrụ ma chọọ mbinye aka na nnyefe. Enweghị nnapụta na Sọnde.
All bara nnukwu uru gosiri dị ka 'dị' na-na ngwaahịa na njikere maka ozugbo Mbupu. A na-ahazi iwu n'ime ụbọchị 1 ọrụ. Site na Mọnde ruo Fraịdee.
Ozi Mgbakwunye N’ọtụtụ mba, ebuputara ngwa ahịa ebupụtara ụzọ dị mma isi kwụọ ụgwọ ụtụ isi na ụtụ isi. Aha ndị e debara aha na-ewe ogologo oge, mana na-ezere ụgwọ ndị ọzọ. Anyị nwere obi ụtọ ịbuga iwu gị dị ka "Onyinye", mana biko mara na anyị enweghị ikike ịchịkwa ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ịme na mba gị.
Cheta na: Taxtụ ụtụ ma ọ bụ ọrụ mbubata bụ ọrụ onye na-azụ ahịa. Weghachi mbupu a jụrụ n'ihi ebubo dị otu a. You nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndokwa ọ bụla pụrụ iche.
invoices Nchịkọta niile sitere na GEMIC gụnyere akwụkwọ ọnụahịa zuru ezu. Biko kpọtụrụ anyị tupu ịtụkwasị gị iji bụrụ na ị chọrọ a ahaziri akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ọ dịghị akwụkwọ ọnụahịa mgbe nile.
AKWỤKWỌ: Lekọn Albania (L)
ANG: Netherlands Antillean onye ndu (ƒ)
ARS: Peso nke Argentina ($)
AUD: dollar Australia ($)
BAM: Bosnia na Herzegovina convertible akara (KM)
BBD: dollar Barbadian ($)
BDT: Bangladesh nke (৳)
BGN: Bulgarian lev (ị.)
BRL: Ezigbo onye Brazil (R $)
BTN: Bhutanese agultrum (Nu.)
CAD: dollar Canada (C $)
CDF: French Congo (Fr)
CHF: Switzerland franc (CHF)
CLP: Akwụkwọ Chile ($)
COP: peso nke Colombia ($)
CUC: Peso a na-agbanwe agbanwe nke Cuba ($)
IWU: Peso Cuba ($)
DZD: Algerie dinar (د.ج)
EGP: Pound nke Ijipt (EGP)
ETB: Etiopia nke obodo Ethiopia (Br)
EUR: Euro (A)
FKP: Falkland Islands paụnd (£)
GBP: Pound magburu onwe (£)
GGP: Guernsey paụnd (£)
Onyinye: Gibraltar paụnd (£)
GMD: Gambian Dolsi (D)
GNF: French franc (Fr)
HUF: Oghere nke Hungary (Ft)
ILS: shekel ọhụrụ nke Israel (₪)
IMP: Manx paụnd (£)
INR: Indian rupee (A)
IQD: dinar nke Iraq (ع.د)
JEP: Jersey paụnd (£)
JMD: dollar Jamaica ($)
JOD: dinari nke Jordan (د.ا)
KES: Ụgbọ mmiri Kenya (KSh)
KHR: Ribo Kambodia (៛)
KPW: North Korea meriri (₩)
KRW: South Korea meriri (₩)
KWD: dinar dinar (د.ك)
KYD: dollar Cayman Islands ($)
LBP: Lebanọn pound (ل.ل)
LRD: dollar Liberia ($)
MKD: dened Macedonian (ден)
MMK: Na na na kyat (Ks)
MNT: Mongolian nke onye (₮)
MUR: Mauritius rupee (A)
MXN: Akwụkwọ Mexico ($)
MYR: Mgbaaka nke ndị Malaysia (RM)
MZN: Mberede Mozambique (MT)
NAD: Namibia dollar (N $)
OMR: Omani rial (____.)
PHP: Peso nke Philippines (₱)
RSD: dinarbian dinar (рсд)
Ete: Russian ruble (₽)
RWF: French Franc (Fr)
SBD: dollar Solomon Islands ($)
SCR: Okechukwu rupee (₨)
SDG: Sudanese paụnd (ج.س.)
Chọọ: Swedish krona (kr)
SGD: dollar Singapore ($)
SHP: Saint Helena paụnd (£)
SLL: Sierra lean (Le)
SRD: dollar Surinamese ($)
SYP: Syria paụnd (ل.س)
TMT: mande Turkmenistan (m)
TND: dinar nke Tunisia (د.ت)
LEE: Turkish lira (₺)
TTD: Trinidad na Tobago dollar ($)
TWD: New Taiwan dollar (NT $)
TZS: shilin Tanzania (Sh)
UAH: Ukraine hryvnia (A)
UGX: Ulonda Ugandan (UGX)
VV: Vanuatu vatu (Vt)
WST: Samoan azọ (T)
XAF: Central African CFA franc (CFA) Nkeji edemede
XCD: dollar East Caribbean ($)
XOF: West African CFA franc (CFA) Nkeji edemede
XPF: CFP franc (Mkpu)
EE: Yemeni rial (﷼)
Achọrọ m ịnata mmelite banyere ngwaahịa na nkwalite.